Mba Tsy Hitenenana Betsaka, Nahasarika Ny Kabarin’i Netanyahu Tao Amin’ny Kaongresy · Global Voices teny Malagasy
Mba Tsy Hitenenana Betsaka, Nahasarika Ny Kabarin'i Netanyahu Tao Amin'ny Kaongresy
Voadika ny 05 Marsa 2015 3:38 GMT
Benjamin Netanyahu niatrika ny kaongresy Amerikana (Sary: Pejy Facebook an'ny Praiminisitra Israeliana)
Mba tsy hitenenana betsaka, niteraka resabe ny kabarin'ny Praiminisitra Benjamin Netanyahu nandritry ny fotoana fivoriana niraisana tao amin'ny Kaongresy Amerikana. Tao anatin'ny ezaka nataony hitsivalànana amin'ny fifanarahana iray iarahana amin'i Iran momba ny fitaovam-piadiana nokleary dia nasain'i John Boehner, Lehiben'ny Repoblikana ao amin'ny Antenimieram-pirenena Amerikana i Netanyahu. Niteny nandritry ny 39 minitra i Netanyahu (nahazoany olona 26 nitsangana nitehaka azy), ary nandritra izany no nilazàny fa ny fifanarahana iray iarahan'i Etazonia amin'i Iran dia “mandrafitra ny làlany ho any amin'ny fanaovana baomba iray [atomika].” Mandritra izany ao Soisa, ny sekreteram-panjakana, John Kerry, sy ny iraka Iraniana, Mohammad Jawad Zarif, dia nanambàra fisian'ny fivoarana eo amin'ny resaka momba ny nokleary, voatondro hitohy amin'ny 15 Martsa izao. Any Etazonia, tsy toy ny mahazatra fa niiba ny fanehoankevitr'ireo goavana avy amin'ny liberaly. Chris Matthews mpandray vahiny ao amin'ny MSNBC niantso azy io ho “ezaka fandraisana an-tànana,” tamin'ny nilazàny hoe “Diniho tsara izy io — firenena aiza eto ambonin'ny tany no ho avy ka mety hamela mpitarika avy any ivelany ho tonga haka ny fahefan'ny filoha amin'ny fifehezana ny politika ivelan'i Etazonia?” Nancy Pelosi mpitarika ny Demaokraty niantso azy ity ho “faniratsiràna atao amin'ny sampam-pitsikilovana amerikana,” raha i Christiane Amanpour avy amin'ny CNN indray niantso azy io hoe “maizina” sy “Strangelovian” . Nilaza ny Filoha Obama fa tsy nahita ilay kabary izy (raha toa kosa nibodo tsy nanatrika azy io ny Filoha lefitra, Biden, Demaokratika mpikambana 50 ao amin'ny Antenimiera, ary loholona 8 miray hevitra amin'ireo Demaokraty), tamin'ny nanampiany hoe “tsy nisy zavatra vaovao” ary notondroiny fa tsy nisy safidy hafa natolotr'i Netanyahu mihitsy.
Sorabaventy avy amin'ilay fanentanana #SkipTheSpeech nokarakarain'ny Feon'ny Jiosy Ho Amin'ny Fandriampahalemana, ny Fanentanana Amerikana Ho Fampitsaharana ny Fibodoana Ataon'ny Israeliana ary ny Hetsika Ifotony
Tsy izao no voalohany nanambaràn'i Netanyahu fa efa antomotra ny hanana fitaovam-piadiana nokleary i Iran. Raha ny marina dia efa im-betsaka izy no niteny fa nanoratra lahatsoratra iray i Murtaza Hussain avy amin'ny The Intercept, nomeny lohateny hoe “Ny Vovon'Amboa Lava Nataon'i Benjamin Netanyahu Momba Ny Fitaovam-Piadiana Nokleary Ao Iran.” Araka ny voalazan'ny lohateny, notetezin'ity lahatsoratra ity daholo ireo fotoana rehetra nanaovan'i Netanyahu io fanambaràna io: ny 1995 (“3 hatramin'ny 5 taona”), 1996 (“tena efa faran'izay antomotra”), 2009 (“angamba ho herintaona na roa taona eo”), ary avy eo indray tamin'ny 2012 (“ao anatin'ny volana vitsy”). Ho valin'ny fampitahàn'i Netanyahu ny ISIS sy Iran, notsindrian'i Ali Abunimah mpanorina ny Electronic Intifada fa Iran dia ao anatin'ny ady ataony hanoherana ny ISIS koa, ary manameloka ny Kaongresy Amerikana ho mpankahala Silamo :
Ankehitriny dia ampitovian'i Netanyahu i Iran sy ny ISIS, na dia miady amin'ny ISIS aza i Iran. Miantehitra amin'ny fankahalàna kidaladalan'ny Kaongresy ny Miozolmana i Netanyahu. — Ali Abunimah (@AliAbunimah)
Jon Stewart, tompon'ny fandaharana The Daily Show dia nanesoeso ilay kabary sy ny fanehoankevitr'i Obama, tamin'ny nilazàny hoe “tonga eto [i Netanyahu], namely tehamaina imasom-bahoaka an'i Obama teny amin'ny tavany, ary ny valintenin'ny filoha dia hoe ‘Tsy misy olana, tokony ho fantatry ny tsirairay fa efa nividianako fonon-tànana izy, amin'izay rehefa mamelaka ahy izy dia mba tsy haharary azy loatra ny tànany.” Ny tonian'ny famoahana ao amin'ilay tranonkala Jiosy mpandala fivoarana, Mondoweiss, dia namoaka lahatsoratra iray manamarina ny zava-nisy tamin'ny kabarin'i Netanyahu nomeny lohateny hoe “Fanamarinana Zava-nisy – Netanyahu: Torolàlana Momba Ny Kabarin'ny Praiminisitra Israeliana Tao Amin'ny Kaongresy.” Ao anatin'io, omen-dry zareo ny toe-javatra nisy ka manamarina ny sasantsasany amin'ireo fanamarihany, raha toa kosa ka tsiniany ny hafa. Ohatra, rehefa nidera ny mpanohitra ao Etazonia i Netanyahu tamin'izay nolazainy hoe “fepetra noraisin'ny Firenena Mikambana manohitra an'i Israely,” manazava ny Mondoweiss fa nampiasa fotsiny ny vato tsy azo ivalozana nanànany i Etazonia tamin'ny 2011 mba hanoherana ny fandatsaham-batom-pitokisana nokarakaran'ny Firenena Mikambana hanamelohana ny fitàran'ireo fibodoana ataon'i Israely ao Amoron'i Jordana. Ao amin'ny Twitter, ilay Amerikana Jiosy fanta-bahoka sady mpanoratra, Max Blumenthal, izay tany Gaza nandritra ilay nantsoin'i Israely hoe “Hetsika Fiarovana Sisintany,” dia niampanga an'i Netanyahu ho maniratsira ny fahatsiarovana ireo Jiosy nanohitra ny fasista :
Maniratsira ny fahatsiarovana ireo Jiosy nanohitra ny fasista tao amin'ny tanindrazany i #NetanyahuSpeech . Manamarina ilay fiteny Sionista, antsoiny hoe katahotra malezolezo ry zareo. — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal)
Zokiolona amin'ny fanaozana gazety avy amin'ny gazety Israeliana Haaretz i Peter Beinart, no nitaraina tamin'ny fitanisàn'i Netanyahu an'i Elie Wiesel, ilay sisampaty tamin'ny “Holocaust” (Famonoana tambabe) izay niteraka hatezerana ho an'ireo hafa sisampaty tamin'ny “Holocaust” ny filazàna niteraka resabe momba azy nalefan'ny New York Times nandritra ilay “Fiarovana Sisintany”.
Tena sarotra ny hanazava ny dikany ho antsika izay notezaina sy lehibe tao anatin'ny fanandratana an'i Elie Wiesel ka mahita azy hosoram-potaka tahaka izao — Peter Beinart (@PeterBeinart)
LibyaLiberty nampahatsiahy an'izao tontolo izao ny fotoana nanambaràn'i Netanyahu hoe mety “hisy dona miabo manerana ny faritra” ny fananiham-biìohitra atao an'i Iraka:
Araka ny hanazavàn'i Bibi ny fiantraika miabo ho an'ny faritra ateraky ny fankatoavana & fihetsehana momba ny horohoro noho i Iran, ataovy ao an-tsaina mandrakariva ity
AJ+ ao amin'ny Al Jazeera dia nandefa tatitra iray namintina ireo fanehoankevitry ny Iraniana marobe tamin'ilay kabarin'i Netanyahu Ao amin'ny Twitter, ampiasain'ireo Iraniana ny tenifototra #ShutUpNetanyahu (AkombonyNyVavaRyNetanyahu) mba hilazàn-dry zareo ny hatezerany :
Tsy manana zo mihitsy hiresaka fandriampahalemana ny olona iray mpamono ankizy Palestiniana no sady mpampihorohoro #ShutUpNetanyahu
فارغ ازهمه مشکلات داخل ایران مقابل تو متحدیم Tsy idiranay izay olana rehetra aty Iran fa miray hina izahay hanohitra ny tsy manjary tahàka anao #ShutUpNetanyahu
Nanao fangatahana maro i Netanyahu ary marary an-doha fa tsy mba nahita andro mamiratra toa an'i Ahmadinejad. Mandeha ny andro ary dia mandresy [an'i Ahmadinejad] lery. #Shutupnetanyahu
hatramin'ny 1995 izy no mampihorohoro ny olona rehetra avy ao Iran! Mbola te-hamerina hihaino tokoa va re ianao ? #ShutUpNetanyahu #NetanyahuSpeech
Izany eo ihany fa misy fomba ve handefasana an'i Ahmadinezhad aty? natao hiara-dia ireo roa ireo. Ho mpivady mahafinaritra ireo #ShutUpNetanyahu — Masoud Fatemi (@MasoudFatemi)
Amin'ny maha-Iraniana-Amerikana ahy, menatra aho mahita filoham-pirenena vahiny mikabary aty amin'ny kaondresy Amerikana, henatra ho an'ny kaongresy #ShutUpNetanyahu — Mehdi Saharkhiz (@onlymehdi)
Karl Sharo, Libaney mpanao hatsikana ao amin'ny bilaogy KarlreMarks naneso hoe :
Miatrika ny Kaongresy ny Kalifan'i Baghdad – mampitandrina momba ny fifanarahana iarahana amin'i Iran.
Nanampy tamin'ny fandikàna ity lahatsoratra ity avy amin'ny teny Farsi i Mahsa Alimardani.